Hay’adda Bisha Cas ee Imaaraadka oo howlo afur qeybin ah ka wadda Muqdisho. [Sawirro] | Kobciye24.com
Hay’adda Bisha Cas ee Imaaraadka oo howlo afur qeybin ah ka wadda Muqdisho. [Sawirro]
Jun 6, 2017 - jawaab
Hay’adda Bisha Cas ee dowladda Imaaraadka Carabta ayaa maalintii 9-aad waxa ay ka wadaa magaalada Muqdisho howlo Afurin iyo Raashin bisil loogu qeybinayo dadka masaakiinta ah si loo caawiyo Qoysaska danta yar inta lagu guda Jiro Bisha barekesan ee Ramdan.
Mashruuca Afurinta oo ay Hay’adda Bisha Cas ee Imaaraadka carabta ka waddo Magaalada Muqdisho waxaa ka faa’iideysanaya maalin kasta Boqolaal qoys kuwaas oo isugu jira barakacayaal, iyo dadka danta yar ee ku nool degmooyinka gobolka Banaadir.
Howlaha Afurinta waxaa laga sameeyaa Dhamaan Degmooyinka Gobolka Banaadir iyada oo Maalin kasta laga qeybiyo Afar degmo.
Degmooyinka ay bisha Cas Imaaraadka Carabta manta deeqda raashinka bisil ka qeybiisay waxaa ka mid ah Waabari, Hodon, Cabdicasiis, iyo Boondheere, iyadoo Raashinkaasi Afurinta ah ay ka faa’iideysteen qoysas aad u fara badan oo ku nool degmooyinkaas.
Dadkii ka faa’ideystay afurintan ayaa uga mahadceliyay Hay’adda Bisha Cas ee Dowladda Imaaraatka Carabta afrunta ay usameeysay oo ay sheegeen in ay ku soo beegantay xilli ay si aad ah ugu baahnaayeen islamarkaana ay tahay mid waxbadan u tareeysa.
Qaar ka mid ah Dadkii ka faa’ideystay afrunta ayaa ku amaanay Dawlada aan walaalaha nahay ee Imaaraadka Carabta sida ay had iyo jeer u garab taagantahay Shacabka Soomaaliyeed, iyagoo tilmaamay in Dowladda Imaaraadka Carabta iyo Hey’adaheeda samafalka ay mar walba oo la gaaro Bisha barajeysan ee Ramadaan ay taageero iyo Kaalmo la garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed.
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa kamid ah dowladaha Carbeed ee markasta taageerada joogtada ah lagarab taagan Shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda, taageeradaas oo isugu jirta dhinacyada Siyaasadda, dhaqaalaha, Caafimaadka, Bini’aadanimada, u gar-gaaridda dadka Soomaaliyeed ee Abaaruha ay saameeyeen.